Beesha Caalamka oo Axmed Madoobe cadaadis saareysa | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo Axmed Madoobe cadaadis saareysa
Beesha caalamka ayaa wadda dadaallo ay ku dooneyso in ay ku hakiso shirka jaraa’id ee lagu wado in Axmed Madoobe ku qabto magaalada Dhuusamareeb.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Ilo wareedyo ku dhow dhow Xalane ayaa sheegaya in saaxiibada Beesha caalamka ay wadaan dadaalladii ugu xooganaa ee lagu baajinayo shirka Jaraa'id ee Madaxweynaha Jubbaland si aan loo sii kala fogaan.
Madaxtooyada Jubbbaland ayaa dhawaan sheegtay in Axmed Madoobe uu dhawaan la hadli doona warbaahinta si uu uga war bixiyo, halka uu marayo shirka iyo arrimaha la isku fahmi la’yahay.
Sidoo kale beesha caaalamka ayaa wadda isku dayo ku aaddan in ay ku baajiyaan kulankii Baarlamaanka ee la filayay inuu berri qabsoomo.
Madaxweyne Farmaajo ayay sidoo kale cadaadis ku saarayaan in uusan ka soo tagin Dhuusamareeb, oo ay u arkaan haddii uu soo baxao inuu xaalku faraha ka bixi karo.
Beesha caalamku waxa ay isku dayaysaa in aan shirka lagu kala tagin, waxayna cadaadis xooggan saarayaan dhinacyada ka qeyb galaya.
Farmaajo iyo Madoobe ayaa isku mari waayay arrinta Gobolka Gedo, labada dhinac ayaana mid waliba war kasoo celiyay aragtiyo isku soo dhawaansho abuurayay oo wajigii koobaad ee shirkaan lasoo jeediyay.
Beesha Caalamka ayaa tan iyo markii uu billwday Shirka Dhuusamareeb si is daba jog ah u soo saaraysay digniinno adag oo ay u jeedinayaan madaxda shirka ka qeyb galaya iyagoo ka digayay in shirku burburo, isla markaana ku baaqayay in la gaaro heshiis is oggol ah oo aan baal marsaneyn heshiiskii September lagu gaaray Mugdisho.